Qaladaadka qoraalka ee uu galo Trump - BBC News Somali
Qaladaadka qoraalka ee uu galo Trump
2 Maajo 2018
Waa wax iska caadi ah in la galo qaladaada xagga qoraalada ah, balse madaxtooyada Donald Trump waxa ay u egtahay in ay u barmoostay heer aanan horey loo arag.
Trump ayaa aad u jecel in uu baahiyo fariimaha Twitter-kiisa , kadibna dib ka saxa wixii qaladaad ah ee qoraalkaas ku jiray, waxaase jirta in qoraalada qaar ay yihiin kuwa aad xasaasi u ah, quseeyana amniga qaranka.
Tusaale warsaxaafadeed kasoo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in "Iran ay haysatay" hubka nuyuukleerka, taas oo loo turjuntay in aysan hadda haysanin balse haysan jirtay, balse saraakiisha Aqalka cad waxa ay sheegeen in uu ahaa qalad xagga qoraalka ka dhacay, loolana jeeday in Iran ay hadda haysato hubka nuyuukleerka.
Xitaa waxa uu qaladaadka qoraalada ku daraa waraaqaha rasmiga ah iyo war saxaafadeedyada, iyada oo mararka qaar laga hadlayo arrimo dublamaasiyadeed oo xasaasi.
Waxaase jira qaladaad aad u muuqda, kana saamayn badan kuwa caadiga ah.
War saxaafadeed kasoo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in Iran ay haysato hubka wax gumaada, hadalkaas oo ka duwan xogtii ay horey u bixiyeen hay'adaha sirdoonka Maraykanka iyo hay'adda tamarka atomic-kada iyo waliba dalalka reer Yurub, kuwaas oo horay u sheegay in Iran ay hakisay barnaamijkeeda nuyuukleerka ah.
Deeqa Afro oo soo saartay hees ku saabsan Donald Trump
Donald Trump oo lagu eedeeyay inuu naceyb faafinayo
Trump oo soo dhaweeyay 'saaxiibkii' Xi Jinping
Khudbadda madaxweyne Trump
Maxaa kala haysta Madaxweyne Donald Trump iyo Falastiiniyiinta?
Balse markii dambe ayaa la badalay, laguna badalay in ay haysan jirtay Nuyuukleerka.
Hase yeeshee sida uu qabo Ned Price oo mar la taliye u ahaan jiray Trump, arrintan waa mid looga gol leeyahay in lagu marin habaabiyo xaqiiqda jirta.
Bil uun kadib markii uu xafiiska la wareegay, Aqalka Cad waxaa kasoo baxay saddex warsaxaafadeed oo lagu qalday magaca ra'isulwasaaraha UK Therasa May.
Waxaa magaceeda laga saaray xarafka H, wuxuuna markaas magaca noqonayaa haweenay jisha aflaamka galmada, taas oo aflaamteeda ay xusid mudantahay in uu ka mid yahay mid lagu magacaabo Aqalka Cad.
Labo mar oo kale ayuu Trump bartiisa Twitter-ka ku qalday magaca Ra'isulwasaaraha, isaga oo xusay magaca haweenay kale oo dadka Twitter-keeda ku taxan ay yihiin 6 qof oo kaliya.
Bishii May, 2017-dii, Twitter-ka Trump waxaa lagu soo qoray erayo aan sax ahayn mar uu socdaal ku tagayay Israa'iil.
Aqalka Cad waxa uu xitaa qalday magaca dalka Denmark oo loo qoray "Denmakr"
Waxaa sidoo kale labo mar la qalday magaca diyaaradda madaxweynaha oo loo qoray "Air Force Once", halkii loo qori laha Air Force One.
Dadka qaarkood oo u ololeeya arrimaha hufnaanta ayaa sheegay in Trump uu marin hababinayo qadkii xiriirka bulshada ee rasmiga ahaa.
Qeybta Galbeed ee Aqalka Cad waxaa ka shaqeeya shaqaalo tiro yar, madaxweynuhuna ma jecla dadka uusan aqoonin, sidaasi darteed waxaad arkaysaa in shaqaalaha ay xafiisyadooda joogaan xilli dambe oo habeenkii ah mararka qaar.
Waxa ay taas muujinaysaa in ay shaqada aad ugu badatay shaqaalaha, taas darteedna ay qaladaadka u sameeyaan.
Inkasta oo qaladaadka qaar ay yihiin kuwa lagu maadeysto, haddane arrintan waxa ay muujinaysaa wax ka weyn sida loo haysto, tusaale ahaan shaqaalaha Aqalka Cad waxa ay u badanyihiin kuwa aanan ku taqasusin shaqooyinka ay hayaan.
Mararka qaarkood waxaa la sheegay in aysan xog badan ka haynin arrimaha ay qorayaal, haddii ay ahaan lahayd Bariga Dhexe ama xiriirka Maraykanka iyo UK.
Sidaasi darteed qoraalada ay diyaariyaan waxaa ka buuxa qaladaadka ay sameeyaan carruuraha iskoolka.